Pixelz: On-Kudiwa Photo Retouching Service yeE-Commerce | Martech Zone
Kana iwe wakambogadzira kana kubata ecommerce saiti, chimwe chinhu chakakomba asi chinodya nguva kugona kwako kuramba uchikwira nezvazvino zvigadzirwa zvemifananidzo zvinorumbidza saiti. Vatatu veDanish vemabhizimusi avo vakaneta nekumhanyisa muchinetso chimwe chete chinogumbura ne post-kugadzirwa yakavakwa Pixelz, chikuva chebasa icho chicha gadzirisazve, gadzirisazve, uye gadzirisa zvigadzirwa zvemifananidzo zvako, kusunungura zvigadzirwa zvako kuti zvigadzire.
E-commerce yakavakirwa pamifananidzo-mabhiriyoni emifananidzo yechigadzirwa ari kudzvanywa, kutsvairwa, uye nekuenzaniswa nevatengi mazuva ese. Kuti ukunde vatengi ivavo, mabrands uye vatengesi vanofanirwa kugadzira emhando yepamusoro mafoto, nekukurumidza, uye nevhoriyamu yakakura kwazvo kupfuura nakare kose. Ndipo panouya Pixelz 'on-demand retouching sevhisi inopinda: yedu yekudyara Specialist Inobatsira Workflows (SAW ™) musangano mutsara unoshandura kugadzirisa kwemifananidzo muSoftware-se-a-Service.
Iwe unokwanisa kugona zvizere kugadzirisa zvinotarisirwa kuburitswa kwemifananidzo yako kuti uve nechokwadi chekuti dzakavakirwa yako e-commerce zvido.
Pixelz yakagadzirawo zvimwe mapepa anodzidzisa pane zvakanakisa maitiro eecommerce chigadzirwa mharidzo. Chikuva chavo chinopa ina dzakasiyana mitengo yemapakeji:
Solo - inopa voga vateereri vane kugona kubvisa kumashure, kurima, kuenzanisa, kuwedzera mimvuri, uye kugadzirisa zvigadzirwa zvemifananidzo. Iyo pasuru inouya isina matatu emahara ekuyedza mifananidzo uye ne3 awa kutendeuka (Mon-Sat).
Pro Mutengesi - inopa e-commerce nyanzvi nezvose zviri muSolo nemutengo wepasi-wepikicha, kuenzanirana kwemavara pamwe neanotevera mangwanani kutendeuka (Mon-Sat), iine 3 awa yekukurumidza sarudzo.
Pro Studio - inopa zvese muSolo kuwedzera kune yakasarudzika retouching, kuenzanisa kwemavara, kudzoreredza, kufashukira kwemabasa, uye kukwira boarding kune emhizha mafoto studio. Inosanganisira chibvumirano chebasa rebasa, nyanzvi pabhodhi, yakazvipira manejimendi account uye vashandisi vazhinji.
API - Sanganisa yekushambadzira yekushambadzira kuita yako yechitatu-bato kunyorera vatengesi, misika, uye nharembozha neRESTful kana SOAP API.
Tags: mufananidzo kubata-kumusoromifananidzomufananidzo kubatapixelzpost productionchigadzirwa mifananidzochigadzirwa photos